हरियो खुर्सानीले तपाईलाई यी सात रोगबाट बचाउँछ! के तपाईलाई थाहा छ ? जानकारी लिनुहोस ! - E ALL NEPAL
HomeAll PostsUncategorizedहरियो खुर्सानीले तपाईलाई यी सात रोगबाट बचाउँछ!...
२.क्यान्सरबाट बचाउँछ ः पुरुषहरुमा प्रोस्टेट क्यान्सरको सम्भावना धेरै हुने गर्दछ । एक शोधका अनुसार खानामा हरियो खुर्सानी खाँदा प्रोस्टेट क्यान्सरबाट बचाउने गर्दछ । हरियो खुर्सानीमा यस्तो तत्व पाइन्छ जसले क्यान्सरको जोखिमलाई कम गर्ने गर्दछ ।
Recent articles दुई विश्वविद्यालयलाई सम्पत्ति भागबन्डा
सचिव छाडेर उपप्रमुख बनेकी ताराकुमारी माडीको...